Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo oo gaaray magaalada London – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo oo gaaray magaalada London
Madaxweynaha dowlada Federalka Soomaaliya Xasan Shiiq Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada London ee wadanka Britainhalkaas oo ay kaga qeybgalayaan shirka lagu wado in uu ka furmo London Talaadada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa in berito markiisii ugu horeysay inuu shirguddoomiyo kulan ay ka soo qeybgalayaan madax ka socoto konton wadan oo caalamka ah iyo hay’ada Qaramada Midoobay iyo Ururka Midowga Afrika.
Kulankan ayaa waxaa si wadajir ah u guddoominaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/wasaaraha Britain David Cameron iyadoo kulankana loogaga hadli doono sidii loo gargaari lahaa dowlada Soomaaliya kadib 22 sano oo ay noqotay dowlad rasmi ah oo uu caalamku aqoonsan yahay.
Madax badan oo caalamka ah ayaa ka qeybgali doonta shirkan waxaana ka mid ah madaxda ka qeybgalaysa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo markii ugu horeysay tegi doona magaalada London ee dalka Ingiriiska tan iyo markii uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalka Kenya.
Madaxweynaha dalka ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliyay R/wasaare ku xigeenka dalka ahna wasiirka arrimaha dibada, wasiirka difaaca, wasiiru dowlaha madaxtooyada, wasiiru dowlaha arrimaha gudaha, wasiirka maaliyada iyo mas’uuliyiin kale.
Wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Muqdisho oo la xiray
Shirka looga hadlaayo Arrimaha Somalia oo gowr dhow ka furmaayo Magaalladda London